Mitohy ny tolona satria maro ny tsy fanjariana na tamin’ny fifidianana filoha na tamin’ny fifidianana depiote, ary ny fitantanana ny firenena, hoy izy ireo omaly. Ankehitriny dia hiroso amin’ny fifidianana ben’ny tanàna indray, izay zara raha misy kandida 32 monja hatramin’ny omaly, kanefa fotoana vitsy tsy hahataperan’ny fe-potoana satria tsy mahatoky ny fahadiovan’ny fifidianana ny olona, matahotra hala-bato, hovaina ny safidim-bahoaka,… hoy izy ireo. Mitaky hatrany ny fanadiovana ny lisi-pifidianana, fanovana ny mpikamban’ny HCC, tsy fitanilan’ny HCC,... aloha izy ireo. Nomarihin’ny HOM2HF fa toa samy hafa ny baiko amin’io resaka lisi-pifidianana io satria ny teto Antananarivo nisy ny fikitihana madinidinika, raha toa ka tsy nisy an’izany tany amin’ny faritra. Roa amin’ireo faritany 6 sisa tsy notetezin’izy ireo nananganonana ny porofo tamin’ny hosoka sy zavatra tsy rariny. Milaza ny handray fepetra hentitra izy ireo, raha minia be marenina ny mpitondra, izay ambarany fa mirehareha ho manana ny maro an’isa tamin’ny alalan’ny hosoka. Maro ny fitondrana nifandimby teto fa tsy mbola nisy fitondrana lany tamin’ny hala-bato naharitra teo izany, hoy ny HOM2F.